Home » Cayaaraha » Horyaalka Kubadda Koleyga 2015-16 oo ka furmay Muqdisho (SAWIRRO)
Waxa magaalda muqdishio gaar ahaan garoonka Wiish ka furmay horyaalka kubadda kolega 2015-16, waxaana xafalda furitaanka kasoo qayb galay masuuliyiin ka soctay Guddiga Olombiakada qar ka mid ah xirirada, madaxada xiririka kubada kolegya iyo marti sharaf kale.
Ugu horeeyn waxaa halkaasi ka hadlay kusimaha xoghayaha Xiriirka kubada koleyga Cabdi Cabdulle Baasaale waxuuna tilmamay in ay horyaalka sanadkan ay ka qayb galayaan 10 koox , halkii ay horey u ahaan jireen sideed koox isla markana ay kooxuhu diyaar usoo galeen tartanka ayna ka rajeynayaa in cayaaro wanasgan ay soo bandhigaan.
Guddoomiyaha xiriirka kubada Koleyga Cabdullaahi Nuur Maxmaed Caddaanin oo xaflada ka hadlay ayaa sheegay in sanadkan garsoori doonaan horyaalka garsoorayaa aqoontoda sare loo qaaday oo lix ka mid ah ay ku guulaysteen shahaada heerka soon ah laga rajeynayo in ay soobadnhigaan habgarsoor wanaagsan oo cadaalad ah.
Guddoomiye Cadaani ayaa intaa kudaray in xiriirka horyaalkan ka xulan doono cayaartoydii matali lahayd qayabah kale gedisan ee xulka qaranka, basle aanan laxuli doonin cayaartooy aqlaaqadiisa aysan wanaaagsanayn si kasta uu u cayaar wanaagsan yahay, waxuuna maamulka , kooxaha , cayaartoyda iyo taaageerayasha ka codsaday in laga wada shaqeeyo sidii uu tartanka ku wanaagsananaan lahaa.
Ugu dambayn waxaa goobta ka hadlay oo tartanka furay Madaxa Amuuraha Goboadla Gos, Ibraahim Xuseen Cali Roombe waxuuna sheegay in xiriirka kubadda Koleyga uu horumarku talaabsanayo si gaar ah ay u farxad gelinayso tirada kooxaha heerka koowaad oo sare loo qaaday taasna ay tartanka ka dhigayso mid xiiso leh.
Madaxweynaha Puntland oo dhagax dhigay garoonka diyaaradaha Garoowe (SAWIRRO)